App Store ကို Myanmar Region ပြောင်းသုံးလိုက်ရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ? ပြောင်းသုံးသင့်ပြီလား? • TECH CORNER
App Store ကို Myanmar Region ပြောင်းသုံးလိုက်ရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ? ပြောင်းသုံးသင့်ပြီလား?
Posted By: Kyaw Thu Htun
မင်္ဂလာပါ Tech Corner ကနေ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ကျွန်တော် ပြောပြချင်တဲ့ သတင်းကောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ Apple က သူရဲ့ App store မှာ Myanmar Region ကို Offical အသုံးပြုခွင့်ပေးလိုက်ခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Article ရဲ့ ခေါင်းစဉ်အတိုင်း Myanmar Region ကို ပြောင်းသုံးလိုက်ရင် ဘာတွေထူးခြားလာနိုင်လဲဆိုတာကိုတော့ အပိုင်း၂ ပိုင်းနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်။
Myanmar Region ပြောင်းသုံးလိုက်ရင် ဖြစ်လာမဲ့ ကောင်းကွက်လေးတွေကတော့ အရင်ကလို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Fake address Fake Phone Number တွေ ကို မိမိ ID မှာ ထည့်သုံးစရာမလိုတော့ပါဘူး။ အမှန်အကန် နေရပ်လိပ်စာ အမှန်အကန် ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ အသုံးပြုလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Securityပိုင်းက ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ပိုပီး secure ဖြစ်သွားပါတယ်။
အရင်ကဆိုရင် Myanmar နိုင်ငံတွင်းက Bank Card (Visa, Mastercard Prepaid/Credit Cards) တွေကို App Store မှာ အသုံးပြုဖို့ အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။ အခုဆိုရင်တော့ Myanmar Region ပါလာပြီဆိုတော့ Myanmar ပြည်တွင်းက (Visa, Mastercard Prepaid/ Credit Cards) တွေ ကို App Store မှာ အသုံးပြုလို့ ရသွားခဲ့ပါပြီ။ ( MPU, JCB တော့ သုံးလို့မရပါ)။ ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရသလောက် AYA Visa နဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဘော်ဒါတွေရဲ့ posts တွေအရ KBZ Mastercard နဲ့လဲ Ok တာ တွေ့ရပါတယ်။
နောက်ပိုင်းဆိုရင် ဖုန်းဘေနဲ့ App Store က Apps/ Game/In-App Purchase တွေဝယ်လို့ရတဲ့ Carrier Billing ပါရလာနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခု တော်တော်သဘောကျစရာ ကောင်းတဲ့အချက်က Apple Music subscription ကလည်း US region ထက်စျေးသက်သာသွားတဲ့အပြင် 6လ free အသုံးပြုခွင့်ရဦးမှာပါ။ အရင်က US Region ဆိုရင် အစမ်း ၃ လ အသုံးပြုပြီးရင် တစ်လကို 9.99$ ပေးရမှာပါ။ အခု မြန်မာ region မှာတော့ အစမ်း ၆ လ သုံးပြီးတော့မှ တစ်လကို 2.99$ စ ဖြတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ Apple Music ကို Android ရော iOS မှာပါ အသုံးပြုနိုင်ပြီး Myanmar Region Apple ID တစ်ခုတော့ လိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Payment Method တစ်ခု (Visa/Master Card) ထည့်ပေးရပါတယ်။ ချက်ချင်းမဖြတ်ပါ ၆ လ နေမှ ဖြတ်မှာပါ။ ၆ လ မတိုင်ခင် cancel လို့လဲ ရပါတယ်။
လက်ရှိ US Apple ID အသုံးပြုနေသူတွေအတွက် Myanmar Region ကို ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် ပြောင်းနည်းကို အောက်မှာ ပြထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ Apple Music ကိုပဲ စမ်းချင်တာဆိုရင် Myanmar Region ID တစ်ခုဖွင့်ပြီး စမ်းလိုက်တာ ပိုအဆင်ပြေမှာပါ။ US Apple ID ထဲမှာ $ လက်ကျန်ရှိနေလို့ Region ပြောင်းမရသူတွေအတွက်လဲ အောက်မှာ ပြောင်းနည်း ပြောပြထားပါတယ်။
အဓိက အားနည်းချက်ကြီးကတော့ Myanmar Region က Region အသစ်ဆိုတော့ တစ်ချို့ Apps and Games တွေ မစုံသေးပါဘူး။ ( Joox , Spotify, Netflix) စတာတွေ မရနိုင်သေးပါဘူး။ နောက်ပိုင်းမှ Apps and Games တွေ စုံလင်လာပါလိမ့်မယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ လိုချင်တဲ့ Apps and Games တွေ Down မရတာ တိုင်ပတ်ပါလိမ့်မယ်။ အရင် US ID နဲ့ ဒေါင်းထားပြီးသား Apps တွေကတော့ ဆက်သုံးလို့ ရပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က ကျွန်တော်တို့ အခုအသုံးများကြတဲ့ US iTunes Gift Card တွေကိုလဲ Myanmar Region ID မှာ redeem လုပ်လို့ မရပါ။ US iTunes Gift Card ဝယ်ပြီးသားဆိုရင် သုံးမရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ Myanmar Region အတွက် iTunes Gift Card သီးသန့်ထုတ်ရောင်းလာနိုင်ချေရှိပါတယ်။
ဒါဆိုရင် Myanmar Region ပြောင်းသုံးသင့်လား?
သင့်ကိုယ်သင် ပြန်မေးကြည့်လိုက်ပါ…အပေါ်က အားနည်းချက်တွေကို သင့်အနေနဲ့ လက်ခံနိုင်ရဲ့လား?
Yes ဆိုရင်တော့ ပြောင်းသုံးသင့်ပါပီ။ (ကျွန်တော်ကတော့ မပြောင်းသေးပါဘူး။ Apps and Games တွေ စုံလာအောင် အချိန်နည်းနည်းစောင့်ပါဦးမယ်။ Apple Music အတွက်တော့ Myanamr Region ID အသစ်တစ်ခုထပ်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။) xD
Recommend ပေးချင်တာကတော့ သင့်အနေနဲ့ itune gift card အသုံးပြုပီး apps and Games တွေ၊ in app purchase တွေ အဝယ်များတဲ့သူဆိုရင်တော့ Visa or Master Prepaid/Credit Card ရှိမှ ပြောင်းသုံးသင့်ပါတယ်။ (Visa or Master Prepaid/Credit Card ကိုတော့ မြန်မာက Bank တိုင်းမှာ အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်)။
တစ်ဆက်တည်း Myanmar Region ပြောင်းနည်းကို အောက်မှာ ဆက်ကြည့်ပါ။ ဘယ်် Region ကို မဆို မပြောင်းခင် မိမိ itune balance က 0$ ဖြစ်နေရပါမယ်။ iTunes balance 1$ အောက်ကျန်နေတဲ့ သူတွေကတော့ Apple Support ကို သွားပြောပီး Balance ကို 0$ လုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်။
Apple Support ကို အရင် install လုပ်ပါ။ Apple Support ကို ဖွင့်ပါ။ Get support Tag ထဲက Billing subscriptions ထဲဝင်ပါ။ Music, Movies and Apps ထဲဆက်ဝင်ပါ။ Managing or editing an Apple ID ထဲဆက်ဝင်ပါ။ Chat Now ကိုနှိပ်လိုက်ပါ မကြာခင်မှာ Apple suppot က advisor တစ်ယောက် Join လာပါလိမ့်မယ်။ Apple ID ထဲက ကျန်နေတဲ့ balance ကို ဖျက်ချင်ကြောင်းပြောလိုက်ပါ။ ဘာကြောင့်ဖျက်ချင်တာလဲ ထပ်မေးလာပါလိမ့်မယ်။ Region change ချင်တဲ့အကြောင်းဖြေလိုက်ပါ။ မကြာခင် Apple Support က Balance ကို ဖျက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ Balance က Zero ဖြစ်သွားရင် Region Change လို့ရပါပြီ။
Region ချိန်းဖို့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ App storeထဲက ဝိုင်းပြထားတဲ့ account ထဲဝင်ပါ။ Country/ Region ထဲထပ်ဝင်ပါ။ Change Country or Region ထဲထပ်ဝင်ပါ။ Myanmar Region ကိုရှာပီးရွေးလိုက်ပါ။ (ကျွန်တော်တို့ အရမ်းမြင်ချင်ခဲ့တဲ့ Myanmar Region ကို offical မြင်ရမှာပါ…ဘယ်လောက်တောင် ကျက်သရေရှိလိုက်လဲဗျာ😍)။
Apple ရဲ့ Terms and Conditionတွေကို agree လုပ်ပေးပါ။ နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ Payment method ကို none ထားပါ။ ဒါမှမဟုတ် visa or mastercard ရှိလို့ ချိတ်ချင်ရင် visa or mastercard ကိုရွေးပီး card no. Expire Date နဲ့ CVV တို့ကို ဖြည့်ပေးပါ။ Last Name နဲ့ First Name ဖြည့်ပါ။ Billing Address အတွက် ပထမဆုံး Street အတွက်ကတော့ မိမိ ရဲ့ လမ်းနာမည် ဒုတိယ Steet အတွက်ကတော့ မထည့်ဘဲထားခဲ့လည်းရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အိမ်နံပါတ်တို့ ရပ်ကွက်တို့ ထည့်လည်းရပါတယ်။
City ကတော့ ကိုယ်နေတဲ့ မြို့ထည့်ပါ။ Stateကတော့ ပြည်နယ်/တိုင်းပါ။ Post Code ကတော့ မိမိနေထိုင်ရာ မြို့နယ်ရဲ့ Postal Code ထည့်ပါ။ မိမိနေထိုင်ရာ မြို့နယ်အလိုက် postal codes တွေ ရှိပါတယ်။ Myanmarရဲ့ ပြည်နယ်/တိုင်းအားလုံးမှာရှိတဲ့ မြို့နယ် တွေရဲ့ Postal code ကို ဒီနေရာကို နှိပ်ပြီးကြည့်ပါ။ Phone ကတော့ ကိုယ့် ph no ကိုထည့်ရုံပါဘဲ ( 09xxxxxxxxx)။ အားလုံးဖြည့်ပီးရင် အပေါ်ဘက်ထောင့်က Done ကို နှိပ်ပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ apple ID မူလ region ကနေ myanmar region သို့ပြောင်းလဲပြီးပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ အရင်ကတည်းက အသုံးပြုချင်တဲ့ apple ID ကို မြန်မာ လိပ်စာ အမှန်နဲ့ မြန်မာ bank card နဲ့ ချိတ်ပီး အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
Written By Kyaw Thu Htun (Tech Corner)
Kyaw Thu Htun
iPhone Status Bar ရဲ့ နာရီဘေးမှာ Emoji လေးနဲ့ အလှဆင်ကြည့်ကြမယ်
Post Views: 532 Facebook0Tweet0Email0Share0Shares0 ပျင်းနေတာနဲ့ iOS 15 ရဲ့ iPhone အပေါ်က နာရီလေးဘေးမှာ Emoji လေးနဲ့ အလှဆင်လို့ရတဲ့ Tip
Samsung ဖုန်းတွေမှာပါတဲ့ One UI ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်များ အပိုင်း (၁)
Post Views: 1,118 Facebook0Tweet0Email0Share0Shares0 ဒီရက်ပိုင်း အနောက်တိုင်းက နည်းပညာ သတင်းတွေကလဲ သိပ်ထူးခြားမှုမရှိတာကြောင့် Tips and Tricks လေးတွေ ရေးဖြစ်ပါမယ်။ Tips
Google Play Store မှာ This item is not available in your country ပြသနာကို ဖြေရှင်းကြမယ်
Post Views: 11,444 Facebook0Tweet0Email0Share0Shares0 အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ … ဒီနေ့မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ Android ဖုန်း အသုံးပြုသူတိုင်း ကြုံတွေ့ရလေ့ ရှိတဲ့ ပြသနာလေး
သင့်ရဲ့ Android ဖုန်းပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရင် ဘယ်လိုပြန်ရှာမလဲ?
Post Views: 2,963 Facebook0Tweet0Email0Share0Shares0 အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ…ကျွန်တော်တို့ Page ရဲ့ အပတ်စဉ် စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နေ့တိုင်း တင်ဆက် ပေးသွားမဲ့ Tech